विवादित व्यवसायी सुमार्गीको बैंक खाता रोक्का गर्न निर्देशन | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
काठमाडौ । विवादित व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको रकम स्थानान्तरण गरेको बैंकको खाता रोक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्रबैंकलाई निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि व्यवसायी सुमार्गीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको ७५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ८३ करोड २५ लाख रुपैयाँ) अन्य बैंकमा स्थानान्तरण गरेका थिए।
राष्ट्रबैंकका एक उच्च अधिकारीले अर्थमन्त्री खतिवडाको मौखिक निर्देशन आएको जानकारी दिए। ‘सुमार्गीले रकम सारेको बैंकको खाता रोक्न अर्थमन्त्रीले मौखिक निर्देशन दिनुभएको हो,’ उनले भने, ‘लिखित रुपमा भने आइसकेको छैन तैपनि हामीले अदालतको आदेश र अर्थमन्त्रीको निर्देशनअनुसार कामअगाडि बढाएको छौं।’
तेइस दल फकाउने जिम्मा पूर्वमन्त्री पाण्डेलाई
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न सशस्त्र समूहलाई वार्ताको आह्वान गरेको छ । राज्य र संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सशस्त्र गतिविधि गरिरहेका…
नव नियुक्त आईजीपीले फुली लगाउन पाएनन् !
काठमाडौं । नव नियुक्त प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द खनाल र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख शैलेन्द्र खनालले बिहिबार फूली लगाउने भएका छन…
प्रेमीका लागि करीनाले बबी देओलको क्यारिअर बर्बाद गरेको खुलासा
मुम्बई । बलिवुड अभिनेत्री करिना कपुरले आफ्नो प्रेमीका लागि अभिनेता बबी देओलको क्यारियर बिगारेको खुलासा भएको छ ।
पूर्वआयुक्त पाठकसँग बयान लिन सुरु
काठमाडाैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग लागेपछि आयुक्तबाट राजीनामा दिएका राजनारायण पाठकसँग बयान…
चिसोका कारण झरना नै हिउँमा परिणत !
एजेन्सी । अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा यतिबेला तापक्रम शून्य डिग्रीभन्दा तल झरेको छ । अत्याधिक चिसोका कारण प्रसिद्ध झरना नायगरा…
बर्बाद भयो यी ठूला माछाहरूको योजना
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणमा ३ महिनाभित्र एक्जियटाबाट लाभकर वापतको रकम असुल्न परमादेश दिएको छ ।